'सञ्जु'मा क्यान्सर पीडित नरगिस बनेकी मनिषा भन्छिन्– त्यो पीडा दोहोर्‍याएर महसुस गर्नु सजिलो थिएन
अभिनेता सञ्जय दत्तको जिवनीमा आधारित फिल्म 'सञ्जु'लार्इ लिएर बलिउड बजार गर्माएको छ । अभिनेता रणवीर कपुर दुरुस्तै सञ्जय दत्त देखिएर मात्रै होइन अभिनेत्री मनिषा कोइराला सञ्जयकी आमा नगरिस जस्तै देखिएकोमा पनि तारिफ भइरहेको छ।
बहुप्रतिक्षित बनेको फिल्मले केही राज समेत खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यही सन्दर्भमा मनिषाले आफ्नो भूमिकाका केही गोपनियता खुलाएकी छिन् । वास्तविक जीवनमा क्यान्सरसँग संघर्ष गरेर जितेकी उनी फिल्ममा पनि क्यान्सरसँग संघर्ष गरिरहेकी हुनेछिन्।
मनिषा भन्छिन्, 'यो सजिलो थिएन। क्यान्सरको त्यो पीडा, त्यो तनाव र त्यो दु:ख दोहोर्याएर जिउनु सजिलो हुने कुरै भएन। नरगिसजीको भूमिका निभाउन आत्मबल निकै धेरै चाहिन्थ्यो । तर मलार्इ त्यो आत्मबल नरगिसजीको नामले दिलायो।'
उनी जस्तो देखिनु र कपाल सम्हाल्नुले मात्रै उनीमाथि न्याय नहुने भन्दै नरगिस भएर जिउने प्रयास गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, 'मैले धेरै समय भित्रैदेखि कसरी उनी जस्तै बन्ने भन्नेमा बिताएँ।'
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री नरगिसलार्इ प्यान्क्रियाटिक क्यान्सर त्यो समय पत्ता लाग्यो, जुन समय उनका छोरा सञ्जय दत्तको डेब्यु फिल्म रिलिज हुँदै थियो। मेमोरियले स्लोन केटेरिङ क्यान्सर सेन्टर अमेरिकामा केही समय उनको उपचार गरियो तर अवस्थामा सुधार आएन। त्यसपछि उनलार्इ भारत ल्याइयो।
सन् १९८१ मे २ मा उनको मृत्यु भयो । त्यसको एक हप्तापछि मे ७ मा सञ्जयको डेब्यु फिल्म 'रक्की' रिलिज भयो । फिल्मको प्रिमियरमा उनका नाममा एउटा सिट खाली छाडिएको थियो।
१. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी आन्दोलन स्थगित, आजदेखि सेवा सुचारु
३. सजाय सहितको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन : कार्यान्वयनको पाटो
४. पहिले बनाएको स्वास्थ्य संरचनामा व्यापक त्रुटि छ : मन्त्री उपेन्द्र यादव [अन्तर्वार्ता]
५. आजबाट तेस्रो नेपाल मेडिकल तथा ल्याब प्रदर्शनी सुरु
६. नेपालमा २९ नयाँ औषधि उद्योग थपिँदै : क्यान्सरदेखि एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने लक्ष्य
७. भक्तपुरमा दर्ताबिना औषधि पसल सञ्चालन
८. कसरी सुत्नेको व्यक्तित्व कस्तो?
९. स्वास्थ्य सचिवमा प्रशासनको कर्मचारी पठाएको निर्णय फिर्ता हुँदैन : मन्त्री बाँस्कोटा
१०. शक्ति ग्रहण कि जिम्मेवारी बहन?
९. संकटग्रस्त स्वास्थ्य– १ : ‘मल्टिअर्ग्यान फेल’ हुने अवस्थामा मन्त्रालय
१०. स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी